FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PAPILLON - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Papillon
'Ity i Frisbee. Papillon CKC-reg trololoured izy. 3 taona mahery monja eto. ' Sary natolotry ny sazy Shayla-Skye
Spaniel kilalao kontinanta
Spaniel Miniature kontinanta
Antsoina hoe Continental Toy Spaniel, ny Papillon koa dia alika kely volo. Ny loha kely dia boribory kely eo anelanelan'ny sofina miaraka amin'ny fijanonana voafaritra tsara. Somary fohy sy manify ny vavam-borona, manidy ny orona. Ny maso mainty sy salantsalany ary boribory dia misy rany mainty. Ny sofina lehibe dia mety miarina na milatsaka amin'ny tendrony boribory. Ny papillons misy sofina mitete dia antsoina hoe Phalene Papillons (Moth). Ny volo eo amin'ny sofina dia lava sy somotraviavy, manome azy toy ny lolo. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Atao avo ny rambony lava, entina ambonin'ny vatana ary rakotra volo lava. Esorina indraindray ny demclaws. Ny palitao mahitsy, lava, tsara ary tokana dia misy volony fanampiny amin'ny tratra, sofina, lamosin'ny tongotra sy rambony. Ny lokon'ny palitao dia fotsy miaraka amin'ny paty misy loko hafa afa-tsy ny aty. Sarontava misy loko hafa ankoatry ny fotsy manarona ny sofina sy ny maso hatrany aoriana ka hatrany aloha.
Ny Papillon indraindray dia antsoina hoe alika lolo, satria toy ny elatry ny lolo ny sofina. Alika sariaka sy manan-tsaina izy izay henjana noho ny fijery azy ary tia manao fanatanjahan-tena any ivelany. Alika kely milalao, velona, ​​mampihetsi-po, mampihetsi-po ary mahafinaritra. Be fitiavana, malemy paika, manam-paharetana ary be hambo, tia mifamihina sy mankafy romp tsara eny ivelany. Tsy miovaova izy ireo, mankatò ary tsy mpandika teny. Ny papillons dia azo zarina hanao fika kely. Tsara amin'ny saka rehefa misy izy ireo ifaneraserana miaraka amin'izy ireo. Izy ireo koa dia mety ho sarotra vaky trano , saingy amin'ny ankapobeny, mora ny mampiofana raha tsy izany. Raha avelanao ho lasa ity alika ity mpitarika fonosana ny olona , mety ho lasa tena tompon'ny tompony izy ary tezitra amin'ny any ivelany. Rehefa mino ny alika fa izy dia mpitondra ho an'ny olombelona, ​​antsoina izy io Syndrome kely alika , fitondran-tena entanin'ny olombelona, ​​izay avela hino ny alika fa tompon'ny trano izy. Izany dia mety hiteraka ambaratonga samihafa olan'ny fitondran-tena toy ny, saingy tsy voafetra ho, mitaintain-doha, avo volo, saro-kenatra, fanahiana fisarahana , fiambenana , fidradradradrana, fikapohana, fanaikitra, fipoahana tsy ampoizina, herisetra ataon'ny alika ary tsy atokisana amin'ny ankizy. Tsy toetra Papillon ireo, fa ny fihetsika entin'ny fomba fitondran'ny olombelona ny alika. Koa satria ny ankamaroan'ny olona manana alika kely, noho ny habeny, dia mamela azy ireo hitantana ilay fampisehoana, tsy amporisihana amin'ny ankizy kely izy ireo amin'ny ankapobeny. Na izany aza, raha mafy orina sy tsy miovaova ny mpitarika ny alikao ianao, manome fitsipika tsy maintsy arahiny ary ferana izay misy azy ary tsy avela hatao, miaraka amin'ny mandeha isan'andro ny fonosana , ny Papillon dia azo atokisana amin'ny ankizy. Ho tony izy ireo raha ampiasaina tsara.
Haavony: Lehilahy 8 - 11 santimetatra (20 - 28 cm) Vehivavy 8 - 11 santimetatra (20 - 28 cm)
Milanja: Lehilahy 8 - 10 pounds (4 - 5 kg) Vehivavy 7 - 9 pounds (3 - 4 kg)
Indraindray mora tratran'ny olana amin'ny kneecaps (patella) amin'ny tongony aoriana, izany dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fandidiana. Ary koa fontanel (fisokafana eo an-tampon'ny karandohany mitovy amin'ny 'faritra malemy' zanak'olombelona). Manitsy ny tenany indraindray fa raha tsy manao izany dia mila arovana ny alika. Ny sasany manana fotoan-tsarotra eo ambanin'ny fanatoranana.
Na dia mety ho alika tsara any an-tanàna aza izy ireo indraindray, dia tsy alika fonenana tsara indraindray, satria ny alika dia manana toe-tsaina matanjaka hiarovana ny fananany, ary maro no hitehaka amin'ny tabataba tsy lavitra eo, tsy hanavaka ny tabataba sy ireo mendrika ny fanairana. .
Mila lolo a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra malalaka azo antoka tsy hitarika, toy ny tokotany malalaka sy mimanda.
Ny sasany hatramin'ny 16 taona
Ny fikolokoloana sy ny fikosehana ny palitao lava, lava, tokana dia zava-dehibe ary mahitsy. Matetika ireo alika ireo dia madio sy tsy misy fofona. Mandro sy shampoo maina rehefa ilaina izany. Tazomy ny hoho ary esory tsy tapaka ny nify satria matetika manangona tartar izy ireo. Mpanaparitaka antonony izy ireo ary tsy matotra na misavoritaka.
Ny Papillon dia iray amin'ireo karazana alika tranainy indrindra, miaraka amin'ny tantara voarakitra any Eropa hiverina 700 taona lasa. Tany am-boalohany dia nandatsaka sofina fotsiny ilay karazany ary nantsoina hoe 'epagneul nain' na 'spaniel dwarf.' Ny ankamaroan'ny fivoaran'ny karazany dia fantatra noho ny fanehoana azy amin'ny sary hosodoko. Ity karazana kely ity dia azo fantarina amin'ny sary hosodoko italianina tamin'ny taonjato faha-13 ka hatramin'ny faha-15 tamin'ny vanim-potoana Renaissance. Matetika izy ireo dia nolokoina tamin'ny vodin'ireo andriambavilanitra frantsay sy espaniola. Ilay alika dia fantatra amin'ny anarana hoe Continental Toy Spaniel, izay anarana ofisialin'ny fenitra FCI mandalo. Indraindray dia nantsoina hoe Toy Spaniel tsotra fotsiny izy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nipoitra ny karazan-tsofina miendrika iray, somary miforitra toa ny sofina lolo. Papillon dia midika hoe 'lolo' amin'ny teny frantsay. Ny AKC dia miantso ny karazany ho Papillon, miaraka amin'i Phalene no anarana ho an'ny karazan-tsofina, fa ny FCI kosa dia miantso ny karazany ho Continental Toy Spaniel miaraka amina karazany roa: Papillon ho an'ny alika malaso ary Phalene ho an'ny alika malaso. Any Etazonia sy araka ny fenitry ny AKC, ny Papillons (eared-éared) sy Phalenes (drop-eared) dia azo ateraka ao anaty fako iray ihany ary aseho miaraka amin'ny karazany iray. Raha mamela ny Papillon sy Phalene hifangaro vady ny AKC, ny FCI dia mandrara mafy ny fampifangaroana olona noho ny olana amin'ny toeran'ny sofina. Ny mpiompy FCI iray dia nilaza hoe: 'Rehefa mifangaro ny Papillon sy Phalene dia ny ankamaroan'ny fotoana tsy mahomby amin'ny sofina roa dia ny vokany, izany hoe ny sofina iray dia nanangana iray nilatsaka na samy niondrika teo ambony na fitambaran'ireo olana voalaza ireo. Ny toerana marina an'ny sofina Phalene dia ny mandry eo akaikin'ny sisin'ny loha tsy mampiseho banga, fa rehefa afangaro ireo roa dia mampiseho ny banga izay antsoina hoe 'sofina misokatra'. Raha misy ny fototarazo mifanohitra amin'ireo karazana sofina tsy marina dia hiseho foana ao amin'ny litters. ' Noho ny sisin'ny rambony lava sy ny fomba nitondrana azy tany aoriana dia nantsoina hoe 'Squirrel Spaniel' i Papillon. Ny Papillon dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1915. Ny sasany amin'ny talentany dia misy: watchdog, hakingana, fankatoavana amin'ny fifaninanana, ary fanaovana hafetsena.
Alika basy, kilalao AKC
Myrna Loy, karazana Phalene
'Ruby the Papillon dia kely dia kely , tsy milanja afa-tsy 4 pounds (1,98 kg.). Alika fampisehoana taloha izy ary aseho eto amin'ny 6 taona. Imbetsaka izy no nandresy tamin'ny Best in Show. Tiany ny manadihady eny ivelany ary avy eo miondrika amin'ny sezany mavokely izy. Tiako ny mijery ny The Dog Whisperer ary nianatra zavatra betsaka. Ary nanandrana ny sasany tamin'ny teknikan'izy ireo tamin'ny fahombiazana tsara. '
'Ity i Lotta, FCI Papillon avy any Islandy. Alika fampisehoana iray taona izy ary nahavita nanao fampisehoana lehibe teto Islandy na dia teo aza ny fahatanorany. Alika kely falifaly izy. Tiany ny milalao any ivelany ao amin'ny tokotaninay lehibe ary tiany ny mandeha mandeha lavitra . Alika kely matanjaka izy ary niara-nandeha an-tongotra na dia an-tongotra 7 ora aza izay tsy nisy olana taminy. Alika mavitrika i Lotta fa mahay mandanjalanja tsara koa izy milamina sy mangina . Tiany ny 'zokiny vavy', izany hoe Fifangaroan'ny Golden Retriever / Labrador , tena betsaka ary miaraka tsara izy ireo. Lotta dia tia olon-drehetra ary tsy saro-kenatra amin'ny olona mihitsy. Vehivavy maditra sy be saina izy nefa fantany fa mpitondra antsika izy. Lotta tia milalao fa izy koa tia mifamihina amin'ny tompony. Manaporofo izany i Lotta ny alika kely dia AZO mahomby toy ny alika hafa lehibe kokoa . Alika mahay mandanjalanja i Lotta, satria manana fanatanjahan-tena ampy izy, fifehezana ary mazava ho azy fa be fitiavana koa. Nijery ny Dog Whisperer aho ary ireo fampisehoana ireo dia nampianatra ahy betsaka momba ny fomba fiasan'ny alika alika sy ny fomba tokony hahazoako sy ny fianakaviako antoka fa fantatr'ireo alikanay fa izy ireo no mpitarika azy. '
Lotta, Papillon FCI avy any Islandy
Fepetra ny Papillon amin'ny tokony ho 2 taona
Gizmo the Papillon avy any Ekosy
Gizmo, papillon, zanany efa-bolana
Ity dia Indy a.k.a. Westway Indian Outlaw amin'ny 12 herinandro.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Papillon
Papillon Sary 1
Papillon Sary 2
Papillon Sary 3
amerikana lavaka omby terrier mainty
sarin'i cavalier king charles spaniel
alika mifanerasera amin'ny alika hafa
alika mpiandry omby alika mifangaro
alika pitbull 8 herinandro
malamute alemanina mpiandry ondry husky mix